ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » လူပျိုသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အမေရိကန်ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများ
တစ်ခုတည်းမိန်းမတို့အဘို့ရာအရပ်ကိုအသင့်လျော်ရှိကြောင်းသေချာအချက်များစွာရှိပါတယ်; Hangout ရန်ကြီးမြတ်သောနေရာများ, ကောင်းစွာပေးဆောင်ကြောင်းအလုပ်အကိုင်များ, ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတစ်ခုတည်းယောက်ျားတွေ, ကျန်းမာသောအစာကိုဧကန်အမှန်ထိုသူတို့အားအချို့. အားလုံးကလျှင်ဤအမျိုးသမီးများအတွက်နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်မြို့များကိုသူတို့အားအချက်အများစုရှိသင့်. အောက်မှာတွေ့လိမ့်မည်တစ်ခုတည်းမိန်းမတို့အဘို့အမေရိကန်ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများ၏စာရင်းကိုထိုသို့သောအချက်များ၏အကွာအဝေးထည့်သွင်းစဉ်းစားပြင်ဆင်ထားပြီး.
1. ချီကာဂို: ဒီမှာ, အမျိုးသမီးများအနေပြီးပြည့်စုံသောမြို့တော်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ခံစားနိုင်ပါသည်; ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်တက်ကြွသောမြို့င်, ဒါပေမယ့်နယူးယောက်စီးတီးတူမာနထောင်လွှားမဖြစ်. Chitown, ဒေသခံများ fondly အဖြစ်မြို့ကိုရည်ညွှန်းအဖြစ်, သဘာဝအလှအပတစ်ခုအချက်အချာနေရာဖြစ်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်း. သင်သည်ဤမြို့ထဲမှာနေသောပြီးတာနဲ့, သင်ရုံကနေထွက်ခွာသွားဖို့မုန်းကြလိမ့်မည်; ဒါကြောင့်ခေတ်မှီရပ်ကွက်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းခြေနှင့်အတူဆောင်သောဖြစ်ပါသည်.
ဒါကြောင့်, ချီကာဂိုအတိအကျတစ်ခုတည်းမိန်းမတို့အဘို့အဘယ်သို့သည်ကောင်း၏? Oprah Winfrey တို့, ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်တွင်အများဆုံးဂုဏ်ပြုသည့်တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသမီးများ, ဒီနေရာမှာအသက်ရှင်တော်မူသည်; ဤမြို့သည်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်ဘို့လုံလောက်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအခိုင်အမာသင့်ပါသည်.
2. Los Angeles မြို့: သင်တစ်ဦးတည်းသောမိန်းမကဲ့သို့ပြည့်အဝတည်ရှိဖို့ဘဝကိုပျော်မွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်, သင် Los Angeles မြို့တွင်နေထိုင်သောစဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်. ဒီ mystic မြေယာရှာဖွေနေ-အကောင်းနဲ့ပြေပြစ်ယောက်ျားနှင့်ပြည့်စုံသည်; ဒါကြောင့်, သင်သည်ဤအရပ်၌တကြိမ်, စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားဖို့ရှာဖွေတာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
မြို့ရဲ့နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ပေါင်းကအားလုံးကိုယခုနှစ်မှတဆင့်ပျော်မွေ့သည်ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရာသီဥတုအခြေအနေများဖြစ်ပါသည်. အဆင်သင့်သောရာသီဥတုအမြဲမြင့်မားသောနတ်၌သင့်ကိုစောင့်ရှောက်မည်နှင့်သင်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်သင်တို့သည်ရအချိန်အများဆုံးဖြစ်စေခြင်းငှါစွမ်းအင်ကိုရလိ​​မ့်မည်. ဟိုမှာ. သင်ကမ်းခြေနှိပ်ဖို့ celeb မျက်မှောက်တော်မှစျေးဝယ်ဖို့အရာရာပြုစေကြမည်.
3. ဘော်စတွန်: လူပျိုအမျိုးသမီးဘော်စတွန်သူတို့ပိုင်အသက်အရွယ်အုပ်စုမသက်ဆိုင်ဘဲမူလကြိုဆိုရှာတွေ့. ကျောင်းသားများအတွက်, မြို့တော်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မှာစာရင်းသွင်းခံရနိုင်ဘယ်မှာဂုဏ်သိက္ခာရှိသောတက္ကသိုလ်ကြီးရှိတယ်. သင်စျေးဝယ်ကိုချစ်ပြီးအမြဲတမ်းခေတ်မှီတစ်ခုခုဝတ်ဖို့လိုပါလျှင်, Newbury Street, အဲဒီမှာင်, ဒီဇိုင်နာဝတ်သောအဝတ်ကိုဝယ်သည်အတွက်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောနေရာအရပ်.
သင်တို့ပတ်လည်ရုမ်းမင်းကိုချစ်နေသောသူတယောက်ဖြစ်ကြပြီးပျော်စရာရှိခြင်းဆိုရင်, ထိုမြို့သည်မြောက်မြားစွာသောသမိုင်းဝင်လမ်းမရှိတယ်, ပြတိုက်, ပန်းချီပြခန်း, ခန်းမနှင့်ပန်းခြံများ.
4. San Diego မှ: San Diego မှသင့်ကိုအစဉ်အစဉ်အဆက်ဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးအသက်ရှုမှား sites များ၏အချို့သောမြို့တမြို့ hosting ခဲ့သည်. ဒါကြောင့်, သင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင့်အသက်တာ၌အချို့သောနှစ်သက်တော်မူအချိန်လေးရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင် San Diego မှပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနိုင်တယ်.
ဒီမြို့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကဝန်းရံထားသည်, သဲကန္တရတွေနှင့်တောင်ကြီး; အဓိပ်ပါယျမှာ, ကချိန်းတွေ့ဘို့သွားကြဖို့အသင့်လျော်သောနေရာများမှကြွလာသောအခါ, ကနေရွေးရန်လုံလောက်သော options များရှိပါသည်. San Diego မှစတကယ့်စည်ကား Downtown သည်နေရာဖြစ်သည်.
5. Las Vegas မှ: သင် Las Vegas မှာမျိုးဆိုရင်သင့်လျော်သောမိတ်ဖက်ဆိုတော့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်ကောင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်. တစ်ဦး၏အဆိုအရ 2013 Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီးပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆောင်းပါး, ဒီ Nevadan မြို့တွင်နေထိုင်သောတိုင်းတစ်ခုတည်းသောမိန်းမအဘို့အတစ်ခုတည်းကိုလူတို့အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ရှိပါတယ်; တိုင်းတစ်ခုတည်းသောမိန်းမအဘို့အ, မြို့ထဲမှာရှိတယ် 1.34 ဒါပေမဲ့. မြို့ရဲ့ဒီ feature Las Vegas တွင်တစ်ခုတည်းမိန်းမတို့အဘို့အမေရိကန်ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများ၏ဒီ list ထဲမှာ 5th Entrant ကို.
သင့်အသက်တာ၏မတ်ေတာ Get မှ Little ကသိနည်းလမ်းများ
5 ရူးသွပ် (သို့သော်စစ်မှန်သော) သင်ချိန်းတွေ့အကြောင်းအရာတို့ကိုသိရန်လိုအပ်!